Wona Sheen-Nyanzvi Kugadzira Zoom Block Kamera - Hangzhou Viewsheen Technology Co, Ltd.
Inotungamira Yakareba Range Zoom Kamera Module Kugadzira
Tine Zvakawanda Kupfuura 10+ Makore Zoom Block Kamera Ongororo
Hangzhou View Sheen Technology Co., Ltd.indasitiri inotungamira zoom block kamera inopa. Basa redu ndere kuve mutungamiriri anotungamira wepasi rose weiyo refu zoom block kamera.
Wona Sheen Technology yakavambwa muna2016 uye yakawana chitupa chebhizimusi renyika yepamusorosoro muna 2018. Musimboti weR & D vashandi vanobva kumabhizinesi anozivikanwa muindasitiri, uye yavo yepakati ruzivo vane makore anopfuura gumi.
Wona Sheen Technology inofambira mberi iwo matekinoroji epamoyo ekuteerera uye vhidhiyo encoding, vhidhiyo kugadzirisa mufananidzo, mota kutonga. Iyo tambo yechigadzirwa inovhara zvese zvakateedzana zvezvigadzirwa kubvira 3x kusvika 90x, Yakazara HD kusvika Ultra HD, yakajairwa renji zoom kune Ultra yakareba renji zoom, uye inowedzera kune network matera emamodyuli, ayo anoshandiswa zvakanyanya muUAV, kuongorora uye chengetedzo, moto, kutsvaga uye kununura, marine uye pasi kufamba, uye zvimwe zvinoshandiswa mumaindasitiri Zviverengero zvezvigadzirwa uye matekinoroji zvakawana nyika patent uye software yekopiriti, uye vane CE, FCC uye RoHS mvumo.
Wona Sheen Technology zvigadzirwa zvinoshandira dzakasiyana seti yemisika yakatwasuka inovhara nyika dzinopfuura makumi maviri uye vanopfuura zana vatengi. Isu tine timu yehunyanzvi yekutsigira timu kuti tione kukurumidza kupindura kune zvido zvevamwe.
Saizvozvowo, kambani inopa hunyanzvi OEM neODM sevhisi kusangana nezvinodiwa zvakasiyana zvemusika. Kwemakore akati wandei apfuura, View Sheen yakawedzera ruzivo rwayo uye ruzivo mukusangana nezvinodiwa nevatengi mumisika yakatwasuka.
Tine 4 zvakanaka
1.Timu yehunyanzvi: Nhengo dzepakati dzeR & D timu dzinouya kubva kumabhizinesi anozivikanwa, neavhareji yemakore gumi R & D ruzivo. Tine kuwanda kwakadzama muAF algorithm, vhidhiyo yekugadzirisa mifananidzo, kutapurika kwenetiweki, vhidhiyo encoding, mhando kutonga, nezvimwe
2. Tarisa: Inobatanidzwa mukutsvaga uye kusimudzira, kugadzirwa kwe zoom kamera kweanopfuura makore gumi.
3.Comprehensive: Iyo tambo yechigadzirwa inovhara ese akateedzana ezvigadzirwa kubvira 3x kusvika 90x, 1080P kusvika 4K, zvakajairika renji zoom kune refu renji zoom kusvika ku1200mm.
4. Hunhu kuvimbiswa: Yakasimudzwa uye yakakwana kuita maitiro uye kutonga kwehunhu kunovimbisa chigadzirwa kuvimbika.